Soo iibso budada Mibolerone (3704-9-4) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada Trenbolone / Mibolerone budada (3704-9-4)
SKU: 3704-9-4. Categories: Taxanaha budada Trenbolone, Anterolics steroids
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Mibolerone (3704-9-4), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Fiidiyowga budada Mibolerone
Budada Mibolerone Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Mibolerone
Formula kelli: C20H30O2
Miisaankani waa: 302.45
Dhibcaha Biyaha: 168-171 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: qaboojiyaha
Color: Biyo cad ama midab cad
Mibooleroon wareega budada
Magacyada kiimikada: Dimetnnortestosterone, budada Mibolerone
Magacyada kale: Hubso dhibco, Matenon, budada Mibolone, Hubi budada dufanka, CDB-904, 3704-9-4
Isticmaalka budada Mibolerone
Ujeedada steroidkani waa inay joojiso wareegga caadada ee eyga haweenka ah si looga hortago uurka. Sida hormoonno badan oo steroid ah, tanina waxa ka mid ah fasalka xoolaha, ma ahayn muddo dheer ka dib markii la ogaaday in ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaashu ay heleen isticmaalka.
Hubi dhibcooyinka waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu awooda badan ee anabolic anomalia. Sidoo kale waa mid ka mid ah steroids-ka ugu dhibaatada badan ee abid lagu sameeyay marka la eego saameynaha. Tani maahan steroid inta badan loo isticmaalo jimicsi jirka ah ama cayaaraha. Inta badan waxaad ku arki doontaa isticmaalka xaddidaadda tartanka horudhaca ama tartanka farsamada. Qaar ka mid ah jir-dhiseyaasha ayaa u isticmaali doona ka hor tartanka si ay u caawiyaan usbuucyada ugu dambeeya ama xilliga ka baxsan xilliga fasaxa dheeraadka ah, laakiin maahan wax caadi ah unug jirka jirka ah. Waanu fahmi doonaa cabsigaan la'aanta ah ee steroidka ah ee jimicsiga jirka ah inta aan sii wadno.
Waa maxay qiyaasta budada Mibolerone
Ciyaartoyda intooda badani waxay isticmaalaan 5mgs oo ku saabsan 30min kahor tababarka ama tartanka. Dhab ahaan ma ahan "la xakameyn" wax kasta marka laga reebo kaararin. Waxaa badanaa la isticmaalaa ka hor inta aan la qaban tababarka iyo tartamada muhiimka ah. Ciyaartoyda qaar ayaa durbadiiba isticmaalaya qiyaaso adag oo steroids ah oo lagu daro dhibcaha koontaroolka ah sida kor-u-qaad hore.
Fiiri Dhibaatooyinka waxaa loo qaadaa hadal waana in la qaato maalin kasta. Qaadashadu waxay caadi ahaan ku dhacaan 200-300mcg maalin kasta laakiin waxay kordhin kartaa 500mcg maalintiiba xaaladaha qaarkood. Go'aanka waxaa mar walba loo qaataa tababarka, qiyaastii daqiiqado 30-40 ka hor tababar, dagaal ama dhacdo. Ma jiraan qiyaaso daaweyn ah oo lagu taliyey maaddaama bukaan-socodkan aan weligiis loo adeegsanin ujeedo aadanaha.
Sida ay budada Mibolerone u shaqeyso
Hubso dhibcaha waa diyaarinta dareeraha 'steroid' budada Mibolerone (CAS 3704-9-4), kuwaas oo ay isticmaalaan kuwa jidhka sameeya, kor u qaadayaasha awoodda leh, cayaartoyda iyo dagaalyahannada, dhamaantood ujeedadoodu tahay kordhinta gardarrada iyo waxqabadka maalinta tartanka. Hubi dhibcooyinka waxay waxtar leeyihiin marka la isticmaalo daqiiqado 30 ka hor tartanka. Isticmaaluhu wuxuu la kulmi doonaa gardarrada kordhaya, diiradda iyo wadada tartanka. Inkasta oo steroidkani aysan ku jirin wax kiciyeyaasha tooska ah, waxay muujinaysaa tallaabo aad u muuqata oo ku saabsan CNS (Nidaamka Dhexe Nervous) iyada oo loo marayo nooca xad-dhaafka ah ee iyorogen. Tani waa sababta kaliya ee daroogada loo isticmaalo ciyaartoyda, maadaama guulaha muruqyada aan la dabooli karin daawadan.
Ma jiraan wax caddayn dhab ah oo aan dhicin ama haddii kale ciyaartoyda ay isticmaalayaan Isticmaal dhibcaha "wareega" sida ay u badan tahay qiyaasaha kale ee steroids. Waxay u muuqataa in steroid-ta ay xaddidan tahay codsi adag oo ah mawduuca horay loo soo doortay ee loo yaqaan "steroid pre-event" oo loogu talagalay in la kordhiyo gardarada iyo tartanka tartanka. Si kastaba ha noqotee, wax guulo ah oo ka soo baxa maskaxda ayaa lagu gaari karaa daroogada sababtoo ah xaqiiqda waxaa loo isticmaali karaa kaliya gaaban 2 isbuucyada yar, ee yar yar ee 5mg. Wakhti kasta oo dheeraad ah, ama qiyaasta culus, iyo welwelka caafimaadka ayaa ah kuwo dhow.
Astaamaha Muhiimka ah: Ka soo kabashada dabiiciga ah malahan wax dhaawac ah oo aan loo geysan Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis iyo in aan horay u jirey xaalad hooseeysa.
· Hepatotoxicity: sida dhammaan C17-a steroids anabolic Check damacsan yihiin sunta. Heerka iyo muhiimada sunta ee hal cyxyXX-a steroid ilaa xiga waa mid aad u kala duwan; Qaarkood waa sun, laakiin si fudud, laakiin tani ma aha mid sahlan. Hubi Dhibaatooyinka waxay yeelan karaan mid ka mid ah waxyeelada ugu xoogan, ee xun ee ku dhaca unugyada beerka ee dhammaan C17-aa steroids. Qiimaha beerka ayaa si wayn u kordhi doona, culays badan ayaa la gelin doonaa beerka.
Haddii aad qabtid cudur beerka ah waa inaadan isticmaalin steroidkan. Isticmaalka waa in sidoo kale lagu hayaa 2-3 oo kaliya toddobaadkii waana in aan loo isticmaalin steroid kale C17-aa. Daawooyinka lagama maarmaanka ah waa in sidoo kale laga fogaadaa marka suurtogalka ah ee badanaa sidoo kale xitaa beerka sunta ah taasina waxay sababi kartaa culeys dheeraad ah beerka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in isticmaalaha khamrigu ka fogaado isticmaalka khamriga inta lagu jiro isticmaalka iyo dhamaystirka nadiifiyaha beerka. Ku guuldareysiga samaynta waxyaabahani waxay keeni karaan dhibaatooyinka beerka, iyo qaar ka mid ah dadka isticmaala diiqada waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan xitaa marka wax walba oo sax ah la qabanayo.
Suuq-geynta Mibolerone Suuq-geynta
Mucaaradada Mibooleroon ma leedahay Saameyn Waxyeello ah
Dhibaatooyinka dhinaca Dhibaatooyinka Baadhitaanku waa badan yihiin. Tani waa mid ka mid ah halista ugu badan ee anabolic anabolic weligeed ah. Sababta oo ah saameynaha dhibcaha ee "Drops" ayaa aad u xoog badan, tani maaha qof aan caadi aheyn oo waligiis isticmaali karo. Waxaa jira dhowr fursadood oo ka fiican. Weerarka sii kordhaya ayaa sheegaya in ka hor inta aan la dagaallami kareynin jahwareerka, hase yeeshee khataraha badiyaa waxay ka badan doonaan abaalmarinta steroidkan. Tani macnaheedu maaha in qofku u dhiman doono, waxaana suurtogal ah in saameynaha dhibcaha ee "Drops Stop" ay tahay in laga fogaado si shahaadad ah (oo aan si buuxda looga fogaan karin).
· Estrogenic: Dhibaatooyinka 'Estrogenic' ama Dhibaatooyinka Baadhitaanku waa mid macquul ah maadama steroidkani uu yahay progestin oo si adag u siyaado. Dhibaatooyinka dhinaca Dhibaatooyinka Baadhitaanka waxaa ku jiri kara ginecomastia, keydinta biyaha iyo cadaadiska dhiigga oo sareeya oo la xidhiidha sii-haynta biyaha oo daran. Hase yeeshe, sababta oo ah isticmaalka badanaa waa mid aad u yar oo daawooyinka loo isticmaalo ay yar yihiin (waxay qaadataa wax yar oo ah budada Mibolerone si kor loogu qaado gardarrada) saameynta estrogenic sida badanaa lama arki karo.
Isticmaalka Aromatase Inhibitors (AI's) sida Anastrozole (Arimidex) waxay ka ilaalin kartaa saameynta daawooyinka estrogenic ee Dhibaatooyinka Baadhitaanka. Tani waxay ku siin doontaa difaac ka yimaada estrogen iyo progesterone la xiriira. Si kastaba ha noqotee, waxqabadka estrogenic aad ayuu u xoogan yahay waxaa suurtogal ah in dhibaatooyinka weli jira ragga qaarkood.
· Androgenic: Saameynaha dhibcood ee dhibcaha ee Dhibaatooyinka Baadhitaanada waxaa ka mid ah finanka, koritaanka timaha jirka iyo timaha luminta ragga oo ku fekeraya in ay noqdaan xayawaan muuqaal ah. Dhibaatooyinka soo raaca ee dhibcaha dhibcaha ee "Drops Check" ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan calaamadaha caabuqa haweenka; Xaqiiqdii, fuuq-baxa heerkulka qaarkood waa la hubaa.
Waayo, genetics dadka isticmaala labadooduba waxay qeexi doonaan darnaanta waxyeelada ifrogenic. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in hormoonka hormoonkan hormoonka ah aan la yareeyn karin isticmaalka 5-alpha reductase inhibitor sida Finasteride; ma isticmaali doonaan.
· Wadnaha-wadnaha: Dhibaatooyinka soo-galootiga ah ee Dhibaatooyinka Baadhitaanka waxaa ku jiri kara kuwa ka mid ah dabeecada wadnaha. Steroidkani wuxuu noqon karaa mid aad u adag kolesteroolka iyo cadaadiska dhiigga. Waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa kolestaroolka HDL (kolestarool wanaagsan) iyo baruurta LDL (kolestarool xun). Haddii uu qofku qabo xaalad wadno-wadareed, horey ama hadda, waa inuusan isticmaalin steroidkaan.
Kuwa isticmaala steroid waxay rabi doonaan inay hubiyaan inay ku nool yihiin hab nololeed oo saaxiibtinimo leh. Cunto caafimaad leh oo hodan ku ah asiidh dufanka omega iyo hoos u dhaca dufanka buuxa iyo sonkorta fudud ayaa aad muhiim u ah. Dhaqdhaqaaqa wadnaha joogtada ah waa mid muhiim ah, sidaa daraadeed haddii aaney noqon karin qayb ka mid ah caadada this steroid maahan adiga. Isticmaalayaashu waa inay sidoo kale ku darsadaan antioxidant kolesteroolka ah waxayna ilaalinayaan isha ku hayaan caafimaadka wadnaha.
· Testosterone: Hubinta Dhibbanayaasha waxay xakameyn doonaan wax soo saarkaaga tijaabada ah ee tijaabada ah waxayna si aad ah u qaban doonaan. Isticmaalka testosterone oo ka baxsan waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo xaalad tijaabo oo hooseeya. Inkasta oo isticmaalka inta badan uu ku noolaado steroid this, mudada isticmaalka ma ka fogaanayso dabiiciga ah ee testosterone dabiiciga ah oo sababay steroid iyo sidoo kale ma genetics shakhsi.
Marka isticmaalka steroid this dhamaaday oo dhammaan steroids ayaa nidaamka nidaamka, nidaamka caadiga ah ee testosterone ayaa bilaabi doona. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagula talinayaa in lagu dhajiyo Pupperte Therapy (PCT). Tani waxay hagaajin doontaa soo kabashada; ma damaanad qaadi doonto mana dhamayn doonto, laakiin waxay hagaajin doontaa hadhaaga soo kabashada wanaagsan. Sida dhammaan steroids, mar walba waxaa jira halis ah in aan dib u soo kabasho buuxda, waana in la tixgeliyaa kahor inta aan la isticmaalin marwalba.
Sida loo iibsado budada Miboleroon laga bilaabo AASraw
Macmacaanka Mibolerone Roodhi:
Methenolone Acetate (Primobolan) budada